Umkhuleko wegazi likaKristu. ? Okwezingane nokuvikelwa
9 Kufundwa iMin
Umkhuleko wegazi likaKristu. Phakathi kwazo zonke izinto esinazo eSontweni LamaKatolika, igazi likaKristu lingenye enamandla kakhulu yingakho likhona umkhuleko egazini likaKristu.
Kuyinto esekhona namanje kuze kube namuhla ngoba isesezandleni zikaJesu Kristu ovukile. Ukukholwa kwethu kugcina umfanekiso kaJesu ephila esiphambanweni lapho igazi lakhe ligobhoza khona ngenxa yothando lwabantu.
Noma ngabe yisiphi isicelo esinaso, sikholwa ukuthi igazi elinamandla likaKristu linamandla anele okusinika lokho esikucelayo.
Umkhuleko ungenziwa noma kuphi futhi konke okudingekayo iwukuba nokholo lokuthi isimangaliso sinikezwe sona.
1 Ingabe umthandazo wegazi likaKristu unamandla?
1.1 Umkhuleko wegazi kaKristu wezingane
1.2 Thandaza igazi likaKristu ngamacala anzima
1.3 Umkhuleko oya egazini likaKristu ukuze uxoshe izinkinga
1.4 Wokuvikelwa ngegazi likaKristu
1.5 Umkhuleko wansuku zonke
Ingabe umthandazo wegazi likaKristu unamandla?
Yonke imithandazo kuNkulunkulu inamandla.
Uma uthandaza ngokholo uzoba nakho konke okufunayo.
Yiba nokukholwa futhi ukholwe emandleni eNkosi yethu uJesu Kristu.
Umkhuleko wegazi kaKristu wezingane
Hawu Baba, ngiza ukuzokucela futhi ngicela ungizwe izwi lami, ngicindezelekile, ngiyangenelela ukuze indodana yami isuke enkampanini embi futhi ingangeni ekusetshenzisweni kwezidakamizwa, notshwala, ijoyine futhi isikole, ngicela kuwe ngenhliziyo yami yonke ngamandla egazi likaJesu Kristu, Nkosi umenze umuntu omuhle futhi.
Nkosi, Baba osezulwini, hlanza umphefumulo wendodana yethu, uyihlanze ebubini, inzondo, intukuthelo, uvalo, usizi, isizungu, usizi nobuhlungu ... ngegazi lakho, sicela ukuthi umguqule abe umuntu othanda abanye , ujabule, uzolile, unomusa, ngaphandle kokwesaba, odlulisa uthando, ngaphandle kosizi, ubumba umoya uwuvikele ngegazi lakho eliyigugu.
Nkulunkulu onesihe, wena owazi konke, obona konke, usinike ukuhlakanipha ngoba singabazali futhi sithanda ukuba ngcono, ngisize ukuba ngiqondwe nabo, siyazi ukuthi uneminyaka emingaki futhi lapho bengaphumeleli futhi / noma behlubuka.
O, igazi likaJesu Kristu elibusisiwe elachitheka uJesu, kwindodana yethu, igazi lakho elibusisiwe futhi elihlanziwe, ukuze limnikeze amandla
Ngikubuza ngisekujuleni kokuba khona kwami.
Ungathandazela umthandazo weGazi likaKristu wezingane onazo nengane yakho.
Izingane ezinento enhle kakhulu engenzeka kithi. Ingabe izithelo zothando lwethu futhi sibemukela kulomhlaba ogcwele injabulo ngokukholwa ukuthi konke kuzobasebenzela empilweni.
Kepha kunezikhathi lapho thina, njengabazali, siphile khona okuhlangenwe nakho okungemnandi futhi kulapho iGazi lingakhona Kristu Kuba ukuphela kwethemba lethu.
Ukucela izingane zethu yisenzo sothando esivulekile esingasenza.
Thandaza igazi likaKristu ngamacala anzima
OGazi likaJesu Kristu elibusisiwe! Igazi elingachazeki, lomuntu nelingcwele, ngigeze, ungihlanze, ungixolele, ngigcwalise ubukhona bakho; Ukuhlanza igazi elinikeza amandla, ngikukhonza ebukhoneni bakho be-Eucharistic e-Altar, ngiyakholelwa emandleni akho nasebusheni bakho, ngiyakwethemba ukuthi uzongilonda kukho konke okubi futhi ngicela kuwe ekujuleni kobuntu bami: ngena umphefumulo wami Ngihlanze, ugcwalise inhliziyo yami futhi uyishise.
Igazi eliyigugu elaphalazwa esiphambanweni futhi liginqika enhliziyweni eNgcwele KaJesu, ngiyakukhonza futhi ngikunikeza ungihloniphise nothando lwakho, futhi ngiyabonga kuwe Nkosi Yagazi Nempilo Yakho kusukela sibonga lawomadoda esisindisiwe futhi sithola ukuzivikela ngaphambili Konke okubi kusizungezile.
O Jesu, onginike isipho esiyigugu seGazi lakho, nangeKalvari, ngesibindi nangokuzinikela okukhulu, ungihlanze kuzo zonke izinhlaka wangithela inani lentengo yokuhlengwa kwami; O Kristu Jesu, okuyi-altare impilo yami, ungidlulisela impilo kimi, ungumthombo wazo zonke izinsiza ezaziwayo, futhi uyisipho esikhulu sikaNkulunkulu ezinganeni zakhe, uyisivivinyo nesithembiso sothando oluPhakade kithi.
Ngiyawabonga wonke amathuba engisindiswe kuwo futhi ngivikelwe ngamandla nangamandla akho, angiqinisa ngokuqiniseka kokuqonda ngokuphelele kobuthakathaka bami, nobuthakathaka bami kanye nekhono lakho lokungivikela ebubini obungizungezile, izinkanuko zikadeveli ezihlala zimbathisa okungaphezu kwamandla ethu kanye namathuba.
Siyabonga ngokuba iGazi laseRoyal elikhulula izimpilo zethu ebumnyameni nasezintweni zobubi ezivame ukusilimaza.
Igazi likaKristu lahluma ngaleso sikhathi lapho anikela khona ngempilo yakhe ngenxa yothando lwesintu futhi kuwo amandla kaNkulunkulu agxile ukusinika izimangaliso esizidingayo.
Kungaba izicelo ezinzima. Izimangaliso eziyiqiniso lapho kuphela amandla angaphezu kwawemvelo angenza khona futhi okungaba amandla weGazi likaKristu.
Lomkhuleko ungenziwa nomndeni noma nomngani, into ebalulekile ukuthi wazi ukuthi kufanele sikholwe, yilokho okuqinisekisa ukuthi umthandazo uyasebenza.
Umkhuleko oya egazini likaKristu ukuze uxoshe izinkinga
Izinkinga, ezimweni eziningi, hlala ngaphakathi kwethu futhi zikulimaze. Sichitha ubusuku bengalali sicabange ngesimo esiyinkinga esinaso futhi lokhu kusilethela imiphumela engokomzimba ecasulayo.
Ukwazi ukuxosha izinkinga ngaphandle kwethu, emakhaya ethu ngisho nangaphandle kwezihlobo zethu eziseduze kuyisenzo esidingekayo futhi kulawa mandla egazi likaKristu angasisiza.
Thandaza ngalesi sicelo esithile futhi ukholwe ukuthi ukuphendula kweNkosi kusendleleni.
Wokuvikelwa ngegazi likaKristu
Nkosi Jesu, eGameni laKho, nangamandla eGazi Lakho Eliyigugu sibopha wonke umuntu, amaqiniso noma izehlakalo isitha esifuna ukusilimaza ngazo.
Ngamandla eGazi likaJesu siqinisa wonke amandla okubhubhisa emoyeni, emhlabeni, emanzini, emlilweni, ngaphansi komhlaba, emandleni kaSathane emvelo, kwalasha esihogweni, nase el mundo lapho sizonyakaza khona namuhla.
Ngamandla wegazi likaJesu siphula konke ukungenelela nezenzo zomubi.
Sicela uJesu athumele iNdlovukazi EBusisekile emizini yethu nasezindlini zomsebenzi eziphelezelwa yi-Saint Michael, iSt.
Ngamandla egazi likaJesu sisayina indlu yethu, bonke abakhileyo (igama ngalinye lalabo), abantu iNkosi ezobathumela kukho, kanye nokudla, kanye nezimpahla Asithumela zona ngomusa ukondla
Ngamandla wegazi likaJesu sibopha umhlaba, iminyango, amawindi, izinto, izindonga nezitezi, umoya esiwuphefumulayo futhi ngokukholwa sibeka umbuthano weGazi Lakhe uzungeze wonke umndeni.
Ngamandla egazi likaJesu sakha izindawo lapho sizokuba khona kulolu suku, futhi abantu, izinkampani noma izikhungo esizosebenzisana nabo (babize ngamunye wabo).
Ngamandla weGazi likaJesu sinqamula umsebenzi wethu wezinto ezibonakalayo nowokomoya, amabhizinisi omndeni wethu wonke, nezimoto, imigwaqo, umoya, imigwaqo kanye nanoma yiziphi izindlela zokuhamba esizosebenzisa.
NgeGazi laKho eliyigugu sibopha izenzo, izingqondo nezinhliziyo zabo bonke abakhileyo nabaholi beLasekhaya lethu ukuze ukuthula Kwakho nenhliziyo Yakho kugcine kubuse kukho.
Siyabonga Nkosi ngeGazi Lakho nangokuphila Kwakho, ngoba sibonga thina sisindisiwe futhi sivikelekile kubo bonke ububi.
Lomkhuleko wokuvikelwa ngegazi likaKristu uqinile kakhulu!
Singacela ukuthi igazi elinamandla likaKristu lisimboze njengengubo yokuvikela esisizungezile ukuze elibi lingasithinti. Asazi thina noma izingane zethu noma yimuphi umndeni wethu nabangane.
Njengoba kwenzeka ku isivumelwano esisha efafaza igazi ezinsikeni zezindlu njengophawu lokuvikelwa, ngokufanayo ngokukholwa sikwenza namuhla sicela lokho igazi likaKristu litholwe emasangweni emizi yethu futhi ngathi futhi sivikele ebubini bonke.
Umkhuleko wansuku zonke
Nkulunkulu wami uze uzongisiza, Nkosi, shesha uzongisiza.
Ngincenga ukuvikelwa okunamandla kweGazi Lokuhlenga likaPrecious, Inkosi yendawo yonke neNkosi yamakhosi.
Ngegama likaNkulunkulu uYise, egameni likaNkulunkulu iNdodana nangegama likaNkulunkulu uMoya oNgcwele: Ngamandla egazi likaJesu Kristu iNkosi, ngifaka uphawu futhi ngivikele, ngivikele futhi ngivine, ukuqonda kwami, ukungazi, ukuqonda, ukuqonda kwami, isizathu sami, inhliziyo yami, imizwa yami, izinzwa zami, ubuntu bami bomzimba, impilo yami yengqondo, ukuba kwami ​​ngezinto ezibonakalayo nokuphila kwami ​​ngokomoya.
Konke engiyikho, konke enginakho, konke engingakwenza, konke engikwaziyo nakho konke engikuthandayo kubekwa uphawu futhi kuvikelwe ngamandla eGazi likaJesu Kristu iNkosi. Nkulunkulu wami, ngisize, Nkosi, shesha uzongisiza.
Ngibeka uphawu lwami lwakudala, lwamanje nolwekusasa lami, ngibopha izinhloso zami, izinhloso, amaphupho, izinkohliso, konke engikwenzayo, konke engikuqala, konke engikucabangayo nengikwenzayo, kuboshwe kahle futhi kuvikelwe ngamandla eGazi likaJesu Kristu iNkosi. Nkulunkulu wami, ngisize, Nkosi, shesha uzongisiza.
Ngibopha umuntu wami, umndeni wami, impahla yami, indlu yami, umsebenzi wami, ibhizinisi lami, umuthi womndeni wami, owedlule nangasemva kwalokho, konke kubekwa uphawu futhi kuvikelwe, ngamandla eGazi likaJesu Kristu iNkosi.
Ngizifihle enxebeni lohlangothi lukaJesu olimele, ngizifihla enhliziyweni engaqondile yeNkosazana eNobusisiwe uMariya, ukuze kungabikho lutho futhi akukho muntu ongangithinta ngobubi babo, amazwi nezenzo zabo ezimbi, ngezifiso zabo ezimbi noma ngenkohliso yabo, ukuze kungabikho muntu ongilimazayo empilweni yami yokomoya, emnothweni wami, empilweni yami, ngokuhlukunyezwa kwabo kuthunyelwe, ngomhawu wabo, ngamehlo abo amabi, inhlebo nokuhleba, noma ngomlingo, iziphonso, iziphonso noma ihexes.
Isiqu sami sonke sivaliwe, yonke into engizungezile ivaliwe, futhi ngi ……. Ngivikeleke unaphakade ngeGazi Eliyigugu Kunazo Zonke loMhlengi wethu.
Ameni, amen, amen.
Thandaza umkhuleko iGazi likaKristu lazo zonke izinsuku ngokukholwa okukhulu.
Lokhu kuyisiko elisisiza ukugcina ukholo luphila emndenini futhi kukhuthaza ubunye bokwenyama nangokomoya kwelungu ngalinye.
Kungenziwa ekuseni ukwethula usuku olusha ngaphambi kobukhona bukaNkulunkulu onamandla onke. Ungenza ukulandelana kwemisho yezinsuku eziyisishiyagalolunye noma wenze umthandazo ozenzakalelayo. Into ebalulekile ukungayeki ukuyenza.
Kuneminyaka lapho ukholo lubonakala kulula kakhulu ukuluphula futhi kungalezo zikhathi lapho imithandazo yansuku zonke iqala ukuthela izithelo. Ukubuza ukuthi ngegazi likaKristu, usuku lwethu lubusiswe lubalulekile futhi lunamandla.
Ngaso sonke isikhathi ngikholelwa ukuthi iGazi likaKristu lomkhuleko linamandla.